Yax-yax soo taagan waa kalmadda Jig-Jiga looga yaqaano Abdi Iley.
Feb 12, (2013 (QOL) Warabaahinta Qorahay ayaa maanta suáalo waydiisay dad shacab ah oo ku sugan magaaladda JigJiga dadkaas oo isugu jira siyaasiyeen, Aqoonyahan, Arday & Dad ganacsadaal ah kuwaas oo ku sugan magaalada JigJiga. Arimo la xidhidha dhanka Amniga ayaan suurtoobaynin in aan idiin sheegno magacyada dadkaas anaga oo u balan qaadnay in anaan soo bandhigaynin magacyadooda.
Suáalo kala duwan ayaan dadka waydiinay kuwaas oo isugu jira xaalada Ogaadeenya dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacayay Gudaha Ogaadeenya kaas oo u dhexeeyay Ciidanka Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya & Askarta Gumaysiga Itoobiya anaga oo dadka aan suáalaha waydiinay noo qireen in ay maalmihii ugu dambeeyay dagaalo aad u badan ka dheceen guud ahaan Ogaadeenya kuwaas oo jab & dhibaatooyin aad u badan loogu gaystay ciidamada Itoobiya oo qaar kamid ah dhulka baadiyaha ah ku doontay CWXO kadibna dagaalo la galeen.
Mid kamid ah dadkii aan waraysanayanay ayaa sheegay in uu jiro isbadal xoogan oo laga dareemayo guud ahaanba dhulka ayaga oo arinta aad laysu waydiinayo tahay ONLF waxay u xoogsheegatay Askarata Itoobiyaanka ah ee aan dhulka garanaynin kuwaas oo qaarkood la siiyay xog aan sax ahayn ayaga oo si xun loogu jabiyay dagaaladii ugu dambaysay kuwaas oo ay ku waayeen saraakiil ay ku dhaadan jireen.
Magaalada JigJiga ayaa dadka ku sugan waxay u yaqaanaan Abdi Iley "Yax-Yax soo taagan" waxayna ugu bixiyeen indha adaygiisa ayaga oo la arko ceebta & fadeexada Itoobiya ku dhacaysa ayuu been & maaweelo la wada arku ku dhawaaqayaan maalin walba.
Saraakiisha Itoobiyaanka ayaa hadda si weyn u arka waxaana magaalada maalmihii ugu dambeeyay yimid saraakiil wayaane ah oo u socday in ay qiimaynayaa Ina Iley ayaga oo ku qiimaynaya beentii ahayd waanu soo afjaraynaa taas oo si kale ku noqotay waxaana la sheegayaa in ay ku canaanteen in uusan waxba ka qaban karin xaaladu taagan. Samoro ayaa ku edeyay Ina Iley in uu yahay shaqsi aan waxba qaban karin isaga oo sheegay in ay kooxdii Hawaarinta ahayd ee ay soo taba bareen hubkodii u gaynaya CWXO ayaga oo dagaalo ay galeena si weyn loogu jabiyay.
Meles ayaa horaan ku yidhi Ina Iley waan ognahay waxa jira oo dhan ee ha isku dayin in aad anaga wax aan jirin noo sheegto arintaas oo dhamaan saraakiisha wayaanuhu ka wada dharagsan yihiin ayuu maalinba qorshe horleh u shegaa waxaase ugu yaab badnayd markii uu yidhi mudo 3 Bilood ayaan ku tir-tiraynaa ONLF ee isagii lagu tir-tiray kooxdii hawaarinta ahaydna noqdeen hal dhuma & haldhaan raaca waxaana goosadkooda lagu shegaa gobalada Soomaaliya ayaga oo aad isu qarinaya.
Samoro ayaa ugu hanjabay in uu ku sii daynayo ninka booskii Meles badalay Hailemariam Desalegn kaas oo horaan qoray qoraalkii uu kaga qaadayay wakiilnimada kaas oo ay saraakiisha Wayaanuhu dideen ayaga oo u arkayay in uu danahoodo si dhaga nugul u fuliyo isaga oo dhanka kalena dhaqaale ku laaluusha Askarata Wayaanaha ah dhaqaalaahas oo uu ka qaado qaar kamid ah ganacsadyaasha & xawaaladaha Soomaaliyeed.